Wiil uu adeer u yahay wasiirkii hore ee difaada C/xakiin Xaaji Fiqi oo ku dhintay dagaalada Suuriya
Wiil Soomaali ah oo lagu Magacaabo Yuusuf Cabdiqani Maxamuud Xaaji fiq isla markaana uu Adeer u yahay Wasiirkii hore ee Gaashandhiga Xukumaddii Saacid C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay dalkaasi Suuriya sida ay sheegtay Warbaahinta Al-shabaab.
Aabaha dhalay Wiilka oo lagu Magacaabo C/qani oo ku nool Degmada Diinsoor ee Gobolka Bay ayaa u sheegay idaacada Andalus ee ku hadasha codka Al-shabaab in 21-kii Bishan Wiilkiisa uu ku dhintay dalka Siiriya isla markaana uu ku faraxsan yahay sida uu yiri talaabada wiilkiisa uu ku dhintay.
Yuusuf Cabdiqani Maxamuud Xaaji fiqi ayaa la sheegay inuu ka tagay dalka Dibadiisa intii uusan ku biirin Kooxda Daacish ee ka dagaalanta Dalalka Suuriya iyo Ciraaq.
Marka laga soo tago hadalka ka soo baxay Aabaha dhalay Wiilkaan ku dhintay dalka Suuriya ayaa waxaan jirin cid Xaqiijisay in Wasiirkii hore ee Gaashandhiga C/xakiin Maxamuud Fiqi uu Adeer uu adeer u yahay iyo in kale.
Soomaali fara badan oo ka timid dalal kala duwan oo caalamka ka tirsan ayaa ku biiray kooxda Daacish ee dagaalada ka wada wadamada Suuriya iyo Ciraaq kuwaasoo qaarkood lagu dilay dagaalada ay kooxdaas wado halka kuwo kalena ay weli ka barbar dagaalamayaan.